Inhlonhlo YaseJutland | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Denmark, Yini ongayibona
La inhlonhlo yasejutland kungumathe omhlaba omuhle okwabelwana ngawo yamazwe amabili. Ingxenye eyodwa eyesiJalimane kanti enye eyesiDanish. Inamabala amahle kakhulu ngakho-ke ithola izivakashi eziningi ezifuna ukuba ngaphandle.
Inhlonhlo isezwekazini lase Denmark nasenyakatho ye Alemania futhi yaziwa futhi ngegama le-Cimbrica noma i-Cimbria peninsula, etholakala ngaleli gama kubantu baseCimbros naseJutos ababehlala kule ndawo. It has namathafa amahle, a lot of nature futhi yebo, a lot of ukuthula. Ungathanda ukuhlangana naye?
1 Inhlonhlo yaseJutland
2 Ezokuvakasha zaseJutland
Ungumnikazi izindawo ezivulekile, amathafa namachibi, kukhona ukuphakama okumbalwa ngakho-ke kunokuba flat nakho ukuqhuma okuthambile. Inhlonhlo ine nxazonke Amakhilomitha ayizinkulungwane ezingama-30 ayizinkulungwane Futhi yize maqondana nosayizi ophelele weDenmark kubalulekile (imele izingxenye ezimbili kwezintathu zezwe), ayihlalwa kakhulu futhi cishe abantu abayizigidi ezimbili nohhafu kuphela abanesibindi abahlala kuwo.
Iphrofayili yasogwini ihlotshiswe ngayo ama-glacial fjords nezinye izindunduma. Ngokwemvelo, ebusika kubanda kakhulu, kuzungeze ama-degree ayi-0, kanti ihlobo linomswakama impela futhi linezinga lokushisa elingaklwebhi ngisho u-20 ºC. Imingcele yeNorth Sea, iBaltic, Kattegat neSkagerrak, kanti empumalanga naseningizimu yiJalimane.
Ingxenye esenyakatho yenhlonhlo yehlukaniswe nezwekazi ngumsele omncane osika i-peninsula ukusuka ogwini kuya ogwini. Bekuvamise ukuba yindawo yokungena nje yamanzi amnene, kepha ngo-1825 ngozamcolo wokuzenzela waseNyakatho yolwandle, ukuxhumana kwafinyelelwa. ogwini kuya ogwini.
Ngasohlangothini lweDenmark kunamadolobha ayishumi futhi cishe bonke bakha idolobha elikhulu elinabantu abaningi kakhulu enhlonhlweni. Ingxenye yaseJalimane inezingxenye ezimbili kanti amadolobha ayo abaluleke kakhulu yiFlenburg neKiel.
Iqiniso ukuthi ama-Anglos okuqala asuka kule ngxenye yeYurophu aya kulokho okwakuzoba yiNgilandi ekugcineni, yingakho igama lelo. Namuhla bakhuluma a ulimi lwesigodi lwendawo okwehluke kakhulu kusiDanishi esisemthethweni. Yize ibilokhu yehla ngokuhamba kwesikhathi, izama ukuzivikela ngezizathu zamasiko.
IJutland inikeza umlando, isiko kanye nemvelo. Ingabe yena enyakatho jutland okusinikeza okwakamuva. Inyakatho cishe iyizwe elihlukile ngenxa yeStrarait noma iLimfjord esikhulume ngayo ngenhla. Ulwandle lumhaqa yonke indawo ngakho-ke ngendlela ehlukanisiwe futhi amahora amaningi okukhanya kwelanga ajabulela ehlobo.
Lapha enyakatho kulapho amadolobha izivakashi kakhulu zigxile, abanye abafana nabadobi, noma nedolobha lanamuhla le- Aalborg. Lo muzi ungowesine ngenani labantu abahlala emadolobheni ezweni futhi uyi Amakhilomitha angama-412 ukusuka eCopenhagen. Ibheka olwandle futhi izungezwe izintaba nezindawo ezimbalwa eziphansi. Idolobha lisuka Imvelaphi yangenkathi ephakathi futhi ugxila emahhotela, eminyuziyamu nasezitolo zokudlela. Yindawo enhle yokuhlala.
Kunamachibi okufakelwa aseduzane, anamaningi amapaki nezindawo eziluhlaza, ipaki yetimu, amathuna e-viking, izakhiwo zomlando ezifana nehholo ledolobha lekhulu le-XNUMX noma izindlu ezehlukene zabathengisi abacebile ngisho ne inqaba eyakhiwe yiNkosi uCristán III. Wayazi nokuthi angaba kanjani inhliziyo yenhlangano yobuciko eyaziwa ngokuthi abadwebi bakaSkane, eminyakeni eyikhulu edlule.
Lapha eNyakatho Jutland kubuye kube nepaki kazwelonke endala futhi enkulu kunazo zonke eDenmark, i- INational Park yakho enamakhilomitha-skwele angaphezu kuka-200 namathafa amahle ane- izimfunda, ulwandle nezindunduma. Futhi phakathi kwabo uzobona abaningi ama-bunkers asuka eWWII. Indlela enhle yokuhlola ukwakheka kwezwe ukuqasha ibhayisikili njengoba kuningi imizila yokuhamba ngebhayisikili noma imizila yokuhamba. Ibuye inikeze ukuvakasha kusuka ku- ukudoba, ukuntweza olwandle noma ukayaking
El eningizimu jutlandngakolunye uhlangothi, kungumngcele waseDenmark ngakho-ke kukhona lapha ukuhlanganiswa okuningi komlando namasiko. IFlensburg Fjord ingumngcele wemvelo neJalimane kepha kunamabhishi namathafa avulekile kangangoba abonakala ekuhlasela.
El Waden Sea kuyipaki lesizwe, ingcebo yemvelo kulabo abayijabulelayo ukubuka izinyoni nezilwane zasendle. Kuyindawo Yamagugu Omhlaba. Futhi lapha, eningizimu, kukhona izinqaba, amadolobha asendulo kanye namasonto amadala Kusesimweni esihle kakhulu. I- inqaba yiKoldinghus, namuhla incithakalo. Kukhona nombhoshongo wamanzi omdala eTonder, namuhla ophenduke nendawo yokugcina amagugu.
Futhi njengoba iSouth Jutland inqamula eJalimane, uzofunda okuningi ngobudlelwano phakathi kwamazwe womabili phakathi neMpi Yesibili nangaphambilini, ngempi phakathi kwalezi zizwe ezimbili ngekhulu le-XNUMX. Kukhona futhi i- Umnyuziyamu waseFrtoslevlejrens.
Isikhathi esedlule sangesikhathi se-medieval sigxile kufayili ye- ISonderborg Castle Museum futhi ku IKnights Tournament ebanjwa lapha minyaka yonke. Kuyinto ejwayelekile yasendulo enama-knights, amahhashi nemikhonto. Futhi uma usuthanda amaViking manje njengoba eseyimfashini ungaya eningizimu yeJutland bese ubona i- Izinqaba zeViking zeDanevirke.
Ngabe uya ehlobo ufuna jabulela amabhishi? Yebo, kunamabhishi athulile, ngokwesibonelo Inhlonhlo yaseKegnaes, e-Als, isiqhingi noma ogwini lwaseLittle Belt. Futhi oLwandle lweWadden noma esiqhingini saseRomo, esinamabhishi aso amakhulu.
Ungafika kanjani futhi uzungeze iJutland? Inyakatho ilula kakhulu ngoba icwecwe kakhulu futhi ngesikhathi esifushane uhamba kakhulu noma ku- imoto, isitimela noma ibhasi. Ilungele ukuhamba ngebhayisikili ngoba inenethiwekhi emakwe kahle ye- imizila yamabhayisikili futhi ayinakho ukuphakama okungenakwenzeka. Uma unesifiso sokwazi isiqhingi esincane esisogwini ungahlala usebenzisa i- izikebhe. Ngokuqondene namabhasi, asebenza amadolobha ngamadolobha naphakathi kwawo futhi.
Emadolobheni amakhulu ibhasi ligijima njalo ngemva kwemizuzu engama-20 futhi kunamabhasi asebusuku, kodwa ezindaweni ezincane angahamba ehlobo kuphela. Uma unentshisekelo, bhala le webhusayithi www.windy.com ukuthola eminye imininingwane. Isitimela sinethezekile futhi siyashesha futhi ungathenga ithikithi esiteshini esifanayo ehhovisi lamathikithi noma emshinini ozenzakalelayo. Ukuhlala okuhleliwe kunenye intengo, yebo, yize kunconywa ngezikhathi eziphakemeyo. Enye indlela ukusebenzisa ithikithi rejsekort, ekuvumela ukuthi uhambe ngesitimela, ngebhasi nangemetro futhi ukhonza kulo lonke elaseDenmark.
Ekugcineni, imininingwane ethile ewusizo: inkampani yezitimela yaseDenmark isebenza kahle kakhulu. Uhambo olusuka eConpenhage luye e-AArhus luthatha amahora amathathu futhi luye e-Aalborg cishe amahora amane. Futhi kuyasiza Ukudlula kwe-Eurial.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Denmark » Inhlonhlo yaseJutland